2020 – Year – Channel Myanmar
Tehran Season1 + Season2 Tehran 2020နည်းပညာဆန်ဆန် ဇာတ်လမ်းတွေဆိုသဘောကျနှစ်ခြိုက်တဲ့ CMပရိတ်သတ်ကြီးအတွက်နည်းပညာအေဂျင့်စီးရီးလေးတစ်ပုဒ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်.အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ တာမာဟာ အီရန်ဟာ မွေးဖွားခဲ့ပေမယ့် အစ္စရေးမှာ ကြီးပြင်းခဲ့သူပါ.သူမရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က ကွန်ပြူတာဟက်ကင်းပိုင်းမှာ ကျွမ်းကျင်တာပါပဲ.တနေ့မှာတော့ သူမရဲ့ဌာနက သူမကို အရေးကြီးမစ်ရှင်တစ်ခုကို တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်.သူ့ရဲ့မစ်ရှင်ကတော့ အီရန်နိုင်ငံရဲ့အဏုမြူဓာတ်ပေါင်းဖိုကို ပိတ်ချပစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ခိုးယူပြီး ဌာနချုပ်ကို ပို့ပေးဖို့ပါပဲ.အရေးကြီးမစ်ရှင်ဖြစ်တာကြောင့် အစ္စရေးကနေ အီရန်ကို သွားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးအီရန်မှာ သတင်းအချက်အလက်ခိုးယူဖို့ လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီကိုပါ ဝင်ဖို့ အထိပါအသေးစိတ်စီမံထားပေမယ့်လည်း မထင်မှတ်ထားတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ခက်ခဲသွားခဲ့ပါတယ်.ဇာတ်အိမ်တစ်ခုလုံးကို အသေးစိတ်တည်ဆောက်ထားပြီးအစ္စရန်နဲ့ အီရန်နိုင်ငံကြားက တင်းမာမှုတွေ၊ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေအပြင်အမျိုးသမီးအေဂျင့်တစ်ယောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ သတ္တိကိုပါ ချပြထားတဲ့ စီးရီးကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တာကြောင့်ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ဖို့ ညွှန်းပါရစေအညွှန်းကိုတော့ YKမှ ရေးသားပေးထားပြီးYK, Thet Hnin Hsu, Dollyနဲ့ Van Sui Parတို့မှ ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်Encoded by Thit San Khant & YK Season Complete Episode ...
Tehran Season1 + Season2
Love, Victor Love, Victor (2020) Season 1အမည်မဖော်ဘဲနဲ့ အီးမေးလ်အပြန်အလှန်ပို့ရင်းက ‌ အဆုံးသတ်ကျ ရဟတ်ကြီးပေါ်မှာ ချစ်ရသူနဲ့ အနမ်းပေးခဲ့တဲ့ ‌ခရိဝုဒ်က ဂေး ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ကို မှတ်မိကြသေးလားဗျ။ သူ့ရဲ့ နာမည်က "ဆိုင်မွန် စပီယာ" တဲ့လေ။အခုတော့ သူ့ရဲ့ရင်ခုန်စရာ ဇာတ်လမ်းလေးကြောင့် ဆိုင်မွန်မှာ admirer တွေ အများကြီး ရှိနေပါပြီ။ ဒီလူတွေထဲမှာ ဗစ်တာ ဆလာဇာဆိုတဲ့ ကောင်လေး အပါအ၀င်ပေါ့။ ဗစ်တာဟာ သူ့ကိုယ်သူ အခုထိ ဘယ်လိုလူစားလဲဆိုတာ အဖြေရှာမရသေးတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။တစ်နေ့တော့ ဗစ်တာဟာ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ အလုပ်အပြောင်းအရွေ့ကြောင့် တက္ကဆက်ကနေ အတ္တလန်တာကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်....သူ့ရဲ့ အိုင်ဒေါ ဆိုင်မွန်တစ်ယောက် ချစ်သူနဲ့ ပထမဆုံး အနမ်းပေးခဲ့ရာ ‌အရပ်ဒေသလေးပါ။အတ္တလန်တာမှာ ဗစ်တာဟာ သူ့ကိုယ်သူ အဖြေရှာနိုင်မယ်... ဘ၀သစ် စတင်နိုင်မယ်လို့ ယူဆထားတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း message box ကနေတစ်ဆင့် ဆိုင်မွန် စပီယာထံ သူ့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ခံစားချက်တွေ ပို့လျက်ပေါ့....အတ္တလန်တာ ခရိဝုဒ်အထက်တန်းကျောင်းမှာ ကျောင်းတက်ရင်း ဆိုင်မွန့်လိုပဲ အားကိုးရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ...
TMDb: 8.7/10 1289 votes
[18+]The Forest of Love: Deep Cut (2020) ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် Mini Series လေးကတော့ ၂၀၁၉တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ မူလ forest of love ကို ၂နာရီကျော်ကြာထပ်ပေါင်းထားတဲ့ အပိုင်း၇ ပိုင်းနဲ့ Extended Cut Limited (Adult) Series လေးဖြစ်ပါတယ် ။ဒီကားက Japanမှာရှိတဲ့ သစ်တောတစ်ခုမှာ တစ်ကယ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ၄လောင်းပြိုင်လူသတ်မှု့ကို အခြေခံပြီး လူငယ်တွေကြားမှာ အပြောများတဲ့ Love Spell ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးယဥ် ဇာတ်လမ်းနဲ့ပေါင်းပြီး ရိုက်ကူးထားတာပါဇာတ်လမ်းအကျဥ်းဇာတ်လမ်းထဲက အဓိက ဇာတ်ဆောင် Murata ဆိုတာက စော်တိုင်းကြိုက်တဲ့ Love Spell ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပေါ့ ...Mitsuko ကတော့ မိန်းကလေးသီးသန့်ကျောင်းကို ပြောင်းလာတဲ့ အပျိုစင် လေးပါ တစ်ကျောင်းလုံးက မိန်းကလေးတွေဆို‌တော့ မိန်းကလေးချင်းပဲ ကြိုက်ကြရတာပေါ့ ဒီလိုနဲ့ သူလည်း အဲ့ကျောင်းက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို သဘောကျသွားချင်းချင်း အဲ့ကောင်မလေးက ကားတိုက်ခံရပြီး သေသွားတယ် သတင်းကြားကြားချင်း ...
TMDb: 6.9/10 24,262 votes
[18+]The Forest of Love: Deep Cut (2020)
9-1-1: Lone Star (2020) 9-1-1 Lone Star (2020) 9-1-1 Lone Star ကတော့ 9-1-1 ရဲ့ Spin off ဇာတ်လမ်းတွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ တက္ကဆပ်ပြည်နယ်ကို ယခင်က Lone Star လို့ ခေါ်ခဲ့တာပါ။ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ တက္ကဆပ်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဘေးအန္တရာယ်တွေကို အမှတ် ၁၂၆ မီးသတ်နဲ့ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာန၊ ရဲဌာန တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကို ဇာတ်လမ်းအချိတ်အဆက်မိမိ ဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ တင်ပြထားတာပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ မီးသတ်ဌာနမှူး ကပ္ပတိန် အိုဝင် စထရန်းဟာ တက္တဆပ်ပြည်နယ်၊ အော်စတင်မြို့လေးဆီကို ပြောင်းဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့အတူ သူ့ရဲ့သား တီကေ စထရန်းလည်း ပါလာခဲ့ပါတယ်။အော်စတင်မြို့ရဲ့ အမှတ် ၁၂၆ မီးသတ်ဌာနမှူး ဂျဒ်ဟာလည်း တစ်ဦးတည်းသော အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအနေနဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာ ရနေခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်အဟောင်း နဲ့ အသစ်တို့ကြားက အားပြိုင်မှုတွေကို မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်သလို ရယ်မောစရာ ဟာသခန်းတွေကိုလည်း သဘာဝကျကျ မြင်ရမှာ ...
TMDb: 8.4/10 92 votes
Upload(2020) Season 1[Complete]+Season2Upload(2020)ဇာတ်လမ်းတွဲ**************************Season 1[Complete]အပိုင်း( ၁ မှ ၁၀ ) အထိ [ စ/ဆုံး]ကျွန်တော်တို့ဟာ ယခုအသုံးပြုနေတဲ့ အင်တာနက် Data Stream ထဲကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဖိုင်တွေသိမ်းဆည်းလေ့ရှိတဲ့ Cloud တစ်ခုခုထဲကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဖိုင်တွေ Upload Download လုပ်ကြသလိုမျိုး ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်း လုပ်နိုင်မှာပဲ၊ လူတွေပြောပြောနေတဲ့ နတ်ပြည် ငရဲပြည်ဆိုတာဟာ Cloud Service ကြီးတစ်ခုများလားလို့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးကြမယ်ဆိုရင် ယခုဇာတ်ကားက အဲဒီစိတ်ကူးကိုအခြေခံပြီး လက်ရှိ သတ္တလောကနဲ့ ခေတ်လွန်နည်းပညာကြားကို ယုတ္တိဆန်အောင် ရိုက်ပြထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလို့ ညွန်းပါရစေ ၂၀၃၃ ခုနှစ်မှာ နေရာတကာမှာ AI စနစ်တွေ အသုံးများလာတဲ့အပြင် လူတွေဟာအရမ်းကို သက်တောင့်သက်သာနေနိုင်လာကြပါတယ် လူတွေဟာ ယနေ့ခေတ်လို သေရင်နောင်ဘဝရောက်တာမျိုးအပြင် မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်တမလွန်ဆီကိုလည်း Upload တင်နိုင်လာကြပါတယ်။ ဆိုတော့ကာ... ရောဂါတစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သေဆုံးချိန်နီးလာရင် ရှေးရှေးတုန်းကအတိုင်း ပုံမှန်အတိုင်းသေဆုံးမလား ဒစ်ဂျစ်တယ်တမလွန်ကို ရွေးချယ်မလားက အရေးကြီးလာပါတယ် တကယ်တော့ ...
TMDb: 8.7/10 51 votes
Upload(2020) Season 1[Complete]+Season 2
Show!terview with Jessi (2020) Show Iterview with Jessiအားလုံးရဲ့အချစ်တော် Rapper Queen Jessi ရဲ့ Showterview with Jessi အစီအစဉ်လေးလာပါပြီနော်ဒီအစီအစဥ်ကတော့ သာမန် interview အစီအစဥ်တွေနဲ့မတူဘဲ Rapper မမ Jessi က MC အဖြစ်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ နာမည်ကြီး Idol တွေ အဆိုတော်တွေ သရုပ်ဆောင်တွေ နဲ့ အခြားနယ်ပယ်အသီးသီးက နာမည်ကျော်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လိုတိုရှင်း interview မယ့် အစီအစဥ်လည်းဖြစ်ပါတယ် MC နဲ့ Guest တွေရဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့အချိတ်အဆက်တွေနဲ့ သာမန် interview အစီအစဉ်တွေနဲ့လုံးမတူတဲ့ ပုံစံတွေကိုမြင်တွေ့ရမယ့် အစီအစဥ်ဖြစ်ပါတယ်အခုစတင် တင်ဆက်ပေးလိုက်တာကတော့ Episode(69) ကနေဖြစ်ပြီး နောက်အပိုင်းတွေကို အပတ်စဉ် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း Channel Myanmar မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပတ်ရဲ့ Guest ကတော့ ITZY အဖွဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် Crazy in Love Album နဲ့ Comeback လုပ်ထားတဲ့ ITZY က ချစ်စရာကောင်မလေးတွေကို Jessi ...
Star Trek: Picard – Season 01 (2020) Star Trek: Picard - Season 01=======================Star Trek လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ စတားဖလိ၊ ဖယ်ဒရေးရှင်း၊ အန်တာပရိုက်စ်၊ ရိုမြူလန်၊ ကလင်းဂွန်ဆိုတာတွေ ခေါင်းထဲတန်းဝင်လာကြမှာပါ။Star Trek franchise က အနာဂတ်ခေတ်ရဲ့ အာကာသခရီးသွားကိစ္စတွေအကြောင်း၊ ဂြိုဟ်သားအင်ပါယာတွေအကြောင်း၊ ခေတ်လွန်နည်းပညာတွေအကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းအောင် ရိုက်ကူးတင်ပြနေတဲ့ Franchise ကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာ၊ စီးရီးပေါင်းများစွာ ထွက်ရှိထားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ယခုထပ်မံထွက်ရှိလာတာကတော့ Star Trek: Picard ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Jean-Luc Picard ရဲ့ နောက်တစ်ဖန်စွန့်စားခန်းတွေကို ရိုက်ကူးတင်ပြထားတဲ့ စီးရီးပါပဲ။ အငြိမ်းစားယူထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပစ်ကာ့၊စပျစ်ခြံထဲမှာ အေးဆေးအနားယူနေရသော်လည်း ဘဝကို အသက်မဲ့စွာ ဖြတ်သန်းနေရတဲ့သူတစ်ယောက်။ ဒီလို လူပိုသက်သက်တစ်ယောက် ဖြစ်နေရတာကို ငြီးငွေ့လာတဲ့သူဆီ အမျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ယောက် ရောက်လာခဲ့တယ်။ လာသူက သူနဲ့မသိကျွမ်းဖူးပါပဲ သူကို အကူအညီ လာတောင်းတဲ့သူ။ သူ ကူညီနေတုန်းမှာပဲ သူ့မျက်စိရှေ့တင် အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါ လျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြောင်း၊ ဆင်သက်တစ်အသက်လို့ခေါ်တဲ့ အဆင့်လွန်စက်ရုပ်လူသားတွေအကြောင်း အကုန်သိလာရပြီး အရှုပ်ထုပ်ကြီးထဲကို ဝင်ပါရတော့တာပဲ။File size…350mb Quality…1080p WEB-DL.DD.5.1 H264 FGT Format…mp4 Duration…40min Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder…sithu Translator…El' Moh Links are ...
Star Trek: Picard – Season 01 (2020)
Cherry Magic! (2020) Cherry Magic (2020)ဂျပန်မှာ ယုံတမ်းစကားတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အသက် ၃၀ ပြည့်တဲ့အထိ လူပျိုစစ်စစ် ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင် အသက် ၃၀ ပြည့်တဲ့နေ့မှာ စုန်းထီး ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ဆိုတာပါပဲ။အသက် ၃၀ ပြည့်တဲ့အထိ ယင်ဖိုရော ယင်မပါ မသမ်းဖူးသေးတဲ့ အာဒါချီ တစ်ယောက် ၃၀ ပြည့် ယုံတမ်းစကား တစ်ခုအတိုင်း ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ .....အာဒါချီက လူတွေရဲ့စိတ်ကို ဖတ်နိုင်လာပါတော့တယ်။ လူတိုင်းရဲ့စိတ်ကို ဖတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ သူ လေးစားအားကျရတဲ့ ကူရိုဆာဝါ ရဲ့ ရင်ခုန်နေသူကို သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ သူ မယုံနိုင်အောင် ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ကူရိုဆာဝါ ကြွေနေတဲ့သူဟာ အာဒါချီ ပဲ ဖြစ်နေလို့ပါပဲကဲ ..... ဇာတ်လမ်း ဘာဖြစ်မလဲ ဆက်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။မင်းသားနှစ်ယောက်ကလည်း ဓာတုဗေဒမိလွန်းလို့ ဂျပန် BL Drama လောကမှာ ဟိုးဟိုးကျော်သွားခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ကူရိုဆာဝါ အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသား Machida Keita ကိုတော့ Alice in Borderland ထဲက ခါရူဘီ ...
TMDb: 8.8/10 21 votes
Bridgerton Season 1+2 (2020) (17+) ၁၈၀၀ ခုနှစ်များဆီက အင်္ဂလန်ပြည်ရဲ့ ကြေးရတတ် အထက်တန်းလွှာများကြားမှာ မယ်မယ်ရရ အပျင်းဖြေစရာ လုပ်စရာရယ်ဆိုလို့ အတင်းအဖျင်း ပြောကြတာ သမီးတွေ လင်ကောင်းသားကောင်းရဖို့ စပ်ကြ ဟပ်ကြတာတွေပဲ ရှိပါတယ်ဒီထဲမှာမှ အထူးသဖြင့် မုဆိုးမ လေဒီဘရစ်ဂျာတန် နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖယ်သရင်တန်တော် အိမ်တော်က မျက်နှာပေါက်ဆိုးဆိုး သမီးတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ လေဒီဖယ်သရင်တန်တို့ကတော့ လန်ဒန်မြို့ရဲ့ အသုံးတော်ခံပါဒီထဲမှာ အပျော်အပါး အလွန်နှစ်ခြိုက်တော်မူတဲ့ အပျင်းဖြေရအောင် အမြဲ ပါတီပေး ပွဲခံနေတတ်တဲ့ ဘုရင်မကြီး ချားလော့ကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ မပါမဖြစ် ဇာတ်ကောင်ပါအတင်းအဖျင်းသတင်းတွေ လှိုင်လှိုင်လွှမ်းခြုံထားတဲ့ လန်ဒန်မြို့တော်ကြီးမှာ နောက်ထပ် မပါမဖြစ်ကတော့ လန်ဒန်တစ်မြို့လုံး အပ်ကျတာကအစ သိတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ပေါင်းစုံတို့ရဲ့ ကဝေ စာရေးဆရာမကြီး လေဒီဝှစ်ဆယ်ဒေါင်းပါပဲဒီဇာတ်လမ်းမှာ အရေးကြီးဆုံး အလှည့်အပြောင်းမျိုးစုံနဲ့ ရိုးမန့်စ်ခင်းကြမယ့် စုံတွဲကတော့ မကြာသေးခင်ကမှ အမွေဆက်ခံလာတဲ့ ပူပူနွေးနွေး နယ်စားလေး ဆိုင်မွန်နဲ့ ဘရစ်ဂျာတန် အိမ်တော်က ...
TMDb: 8.2/10 1328 votes
Bridgerton Season 1+2 (2020) (17+)
MTopia ( SuperM) SuperM's MTOPIA 2020 ============================SM ရဲ့နာမည်ကြီးအဖွဲတွေဖြစ်တဲ့ SHINEee , EXO , NCT-U တိုဖြစ်တဲ့ kpop generation3ခုရဲ့အဖွဲအသီးသီးဆီက မန်ဘာတွေပေါင်းစည်းပါဝင်တဲ့ Super M အဖွဲလေးရဲ့ရသစုံရှိးလေးပါ ။ အရင်ကကောင်ငယ်လေး‌တွေလိုပဲ မြင်ခဲ့ရတဲ့ Baekhyun Kai Taemin တိုက Super M မှာတော့အစ်ကိုကြီးတွေအဖြစ်နဲ့ ရင့်ကျက်စွာ ညီ‌ငယ်လေးတွေကို ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးကြသလိုညီငယ်လေးတွေကလည်း အစ်ကိုကြီးတွေကို လေးစားအားကျပြီး အားကိုးအားထားပြုကြတဲ့ပုံရိပ်တွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ ။အဖွဲရဲ့ပထမဆုံးရသစုံရှိးလေးလည်းဖြစ်တဲ့အပြင် တစ်ယောက်တစ်ပေါက် လုပ်ချင်တာလုပ်ကြတဲ့မန်ဘာတွေကို Captain ကြီး Baekhyun က ဘယ်လိုမျိုး ထိန်းကျောင်းရမလဲဆိုတာကိုလည်းတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်း မရိုးနိုင်အောင် ကြည့်ရမှာပါ ။ Travel show လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တာမိုရှုခင်းအလှအပတွေကိုလည်း ခံစားရင်း healing show လေးလည်းဖြစ်စေမှာပါ ။အပိုင်း ၁၄ ပိုင်းပါဝင်ပြီး တစ်ဆက်တည်းကြည့်ရမှာမို Super M ...
MTopia ( SuperM)
Space Force(2020) Space Force (2020)ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း**********************************အပိုင်း(၁ မှ ၁၀ )ထိ စ/ဆုံး(zip file ဖြင့်လည်း ပြုလုပ်ပေးထားပါသည်...)Space Force ဆိုတာ အစတော့ လေတပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ခွဲတစ်ခု။ Air Force Space Command လို့ခေါ်တယ်။ ၁၉၄၅ ကနေ ၁၉၈၂ ထိတော့ Military Space Program လို့ခေါ်ခဲ့ပေမယ့် ၁၉၈၂ မှာတော့ Air Force Space Program လို့ ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲဒီအဖွဲ့ကို လေတပ်ရဲ့အာကာသဌာနခွဲအဖြစ်ကနေ လုံးဝခွဲထုတ်ပစ်လိုက်ပြီး သီးခြားတည်ရှိနေတဲ့ လွတ်လပ်သောဌာနကြီးအဖြစ် ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာမှာပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ ဒီနှစ် ၂၀၂၀ မေလ ၁၅ရက်နေ့မှာတော့ US Space Force လို့ အမည်ရတဲ့ အမေရိကန်အာကာသတပ်ဖွဲ့ရဲ့ အလံကို ဒေါ်နယ်ထရန့်က တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တယ်။Space X နဲ့ NASA ရဲ့ Crew Dragon ...
Space Force S02 (2022) Space Force (2020)ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း**********************************အပိုင်း(၁ မှ ၇ )ထိ (အစ-အဆုံး)Space Force ဆိုတာ အစတော့ လေတပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ခွဲတစ်ခု။ Air Force Space Command လို့ခေါ်တယ်။ ၁၉၄၅ ကနေ ၁၉၈၂ ထိတော့ Military Space Program လို့ခေါ်ခဲ့ပေမယ့် ၁၉၈၂ မှာတော့ Air Force Space Program လို့ ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲဒီအဖွဲ့ကို လေတပ်ရဲ့အာကာသဌာနခွဲအဖြစ်ကနေ လုံးဝခွဲထုတ်ပစ်လိုက်ပြီး သီးခြားတည်ရှိနေတဲ့ လွတ်လပ်သောဌာနကြီးအဖြစ် ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာမှာပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ ဒီနှစ် ၂၀၂၀ မေလ ၁၅ရက်နေ့မှာတော့ US Space Force လို့ အမည်ရတဲ့ အမေရိကန်အာကာသတပ်ဖွဲ့ရဲ့ အလံကို ဒေါ်နယ်ထရန့်က တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တယ်။ Space X နဲ့ NASA ရဲ့ Crew Dragon Demo-2 မစ်ရှင်အကြောင်း အားလုံးလည်း သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ...
Space Force S02 (2022)
Snowpiercer ( 2020 to 2022 ) Season 1 +2+3Parasite ကားနဲ့ အော်စကာ ရခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာကြီး ဘွန်ဂျိုဟိုရဲ့ နာမည်ကျော်လက်ရာ တစ်ခု ကြည့်ခဲ့ဖူးလား မသိဘူး။ Snow Piercer လို့ ခေါ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ။အခု အဲဒီဇာတ်လမ်းကိုပဲ စီးရီးအနေနဲ့ ရိုက်ကူးထားပါပြီ။ တစ်ပတ်ကို တစ်ပိုင်း ထွက်တာမို့ အပတ်စဉ် တင်ပေးထားတာပါ။စနိုးပီရာဆာ မကြည့်ဖူးသေးတဲ့လူတွေအတွက် အကျဉ်းလေး ပြောပြပါ့မယ်။အနာဂါတ်ကာလတစ်ခုမှာ ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံး အနုတ် ၁၁၉ ဒီဂရီအထိ အေးခဲသွားပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ သက်ရှိတွေအကုန် သေဆုံးသွားပါပြီ။ဒါပေမယ့် ဒီအဖြစ်ကို ကြိုမြင်တဲ့ ဝဲလ်ဖို့ဆိုတဲ့ လူကြီးက အတွဲပေါင်း ၁၀၀၁ တွဲ ပါတဲ့ ဧရာမ ရထားကြီးကို တည်ဆောက်ထားခဲ့တယ်။အဲဒီရထားကြီးကို လုံးဝမရပ်နားဘဲ ကမ္ဘာကြီးကို တစ်ပတ်ပြီး တစ်ပတ် ပတ်နေခဲ့တာ ၇ နှစ်တိုင်လာခဲ့တယ်။ရထားမောင်းနေတဲ့ အရှိန်ကနေ စွမ်းအင်ကိုထုတ်ပြီးသုံးတယ်။ ရထားတွဲတွေမှာ စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးတွေ အကုန်ပါတယ်။ကမ္ဘာပျက်ချိန်မှာ အဲဒီရထားပေါ်ကို ...
Snowpiercer ( 2020 to 2022 ) Season 1 +2+ 3
Young Wallander – Season 01 Young Wallander - Season 01=======================IMDb Rating - 7.2/10ဆွီဒင်နိုင်ငံ မဲလ်မိုမြို့မှာ အခြေတည်ထားတဲ့ ရဲဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ မဲလ်မိုရဲတပ်ဖွဲ့တွင် တာဝန်ကျနေသော သင်တန်းဆင်းကာစ ရဲအရာရှိပေါက်စ ကာ့တ် ဝေါ်လန်ဒါ တစ်ယောက်၊ သူနေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်တွင် ရက်စက်သော လူသတ်မှု တစ်ခုကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံလိုက်ရလေသည်။ ထိုလူသတ်မှုမှ အစပြုလို့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများ၊ နိုင်ငံလုံခြုံရေးပြဿနာများနှင့် ပြောင်း‌‌ရွှေ့ခိုလှုံလာသူပြဿနာ အထိပါ မီးခိုးကြွက်လျှောက် ကြီးထွားလာပါတယ်။ ထိုလူသတ်မှုကရော ပြောင်း‌ရွှေ့လာသူများနှင့် ဘယ်လိုပတ်သတ်နေလဲ။ မတူညီတဲ့ လူမျိုးတွေကြား၊ မတူညီတဲ့အမြင်ပေါင်းများစွာနဲ့ အမှုပေါ် ရှု့မြင်ပုံတွေ၊ ထိုအမှုကို အကြောင်းပြုလို့ အမြတ်ထုတ်ရယူလိုသူတွေနဲ့ သောင်းပြောင်းထွေလာဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ရဲအရာရှိ ပေါက်စ ဝေါ်လန်ဒါ တစ်ယောက် ထိုရှုပ်ထွေးပွေလီလှသော ပြဿနာပေါင်းသောင်း ခြောက်ထောင်များအပြင် ဘဝမှာကြုံတွေ့လာတဲ့ အချစ်ရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စများကိုပါ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရှု့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းကို Leonard Lin မှရေးသားပေးပြီး၊ ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူများကတော့ CM Team မှဖြစ်ပါတယ်။)File Size - (800 MB) / ...
Young Wallander – Season 01
Our Little Summer Vacation (2020) Our Little Summer Vacation (2020)ချွဲဝူရှစ်နဲ့ ဂျောင်ယူမီတို့ရဲ့ ၂၀၂၀ က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့healing program လေးနဲ့ ပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။အရင်ဆုံး main cast လေးနှစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ချွဲဝူရှစ်ကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း our beloved summer ထဲကချွဲအွန်းဖြစ်ပြီး အဲဒီတုန်းကတော့ Parasite ဇာတ်ကားနဲ့ အတော်လေးနာမည်ကြီးနေတဲ့ ကာလပါ။ဂျောင်ယူမီကတော့ Train to Busan မှာ မာဒုန်ဆော့ရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဇနီးသည်နောက်ဆုံး survivor အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူပါ။ ဝူရှစ်နဲ့လည်း တစ်ကားတည်း သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပေါ့နော်။ကဲ အစီအစဉ်အကျဉ်းလေး ပြောပြပေးပါမယ်။Healing program တို့ ထုံးစံအတိုင်း အလုပ်တွေများပြီး မွန်းကြပ်တဲ့နေ့စဉ်ဘဝကနေ ‌ခဏတာရုန်းထွက်ပြီး ကျေးလက်ကမ်း‌ခြေမြို့လေးမှာ တစ်လနီးပါး သွားနေကြမှာပါ။နယ်မြို့လေးဆိုပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝက အပ်ကြောင်းထပ်မနေပါဘူး။အိမ်ခြံဝန်းလေးထဲမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ခင်းလေးလည်းရှိပြီးတစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့ မတူညီတဲ့ ဟင်းလျာအမျိုးမျိုး ချက်စားကြတယ်။မုန့်တွေဖုတ်ကြတယ်။ ဆန်အရက်တွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့။ဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်းသွားပြီး ထုံးတမ်းဓလေ့တွေလည်း လေ့လာကြတယ်။ကမ်းခြေနဲ့နီးတဲ့အတွက် ...
Dark Desire Season 1 and Season2Dark Desire (Season 1) နာမည်အတိုင်းပဲ ခပ်မှောင်မှောင်လေး လာပါပြီ။ မှောင်တာများ မိုက်လို့နော့ Dark Side ဖန်တွေ အကြိုက်တွေ့နိုင်မယ့် ကားမျိုးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ၁၈ ပိုင်းပါတဲ့စီးရီးဆိုတော့ တစ်ဝကြီးကြည့် တစ်ပျော်ကြီးကြည့် ။ Dark Side သက်သက်တော့ မဟုတ်ဘူးနော့။ ဒရာမာ စီးရီးကောင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်နေသေးတော့ ကြည့်ကိုကြည့်ရမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲ။ ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားက Erotic Thriller အမျိုးအစားပါ။ ၁၈ ယောက် ပြည့်အောင် အရင်စုထားဖို့ မှာလိုက်ပါရစေဦး။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ အမျိုးသမီးအကြမ်းဖက်မှုတို့၊ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု ၊ မုဒိမ်းမှု ဒီလိုကိစ္စတွေနဲံအတူတူ အချစ်၊ အိမ်ထောင်ရေး နှင့် ရမ္မက်ဆန္ဒအကြောင်းကို လှလှပပ နဲ့ စပိန်ကားတို့ထုံးစံအတိုင်း Plot Twist ပေါင်းများစွာနဲ့ဆိုတော့ ပရိသတ်အကြိုက်တွေ့မှာ သေချာပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဒီလိုပါ။ အယ်လ်မာဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကို အခြေခံပြီး ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ဖန်တီးထားတာပါ။ သူမရဲ့ အဆင်မပြေတဲ့အိမ်ထောင်ရေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဇာတ်လမ်းလို့ ဆိုလို့ ရပါတယ်။ အချစ်၊ ရမ္မက် နဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ကို ဆေးပညာ၊ မှုခင်း နဲ့ ရောယှက်တင်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာ ပရိသတ်အကြိုက်တွေ့မယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ကား ဖြစ်လာတာပါပဲ။ အမျိုးသမီးတွေလည်း အကြိုက်တွေ့နိုင်တဲ့ ကားတစ်ကားပါပဲ။ အမျိုးသမီးအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေးကို အခြေခံထားတဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေလည်း ...
TMDb: 7.5/10 40800 votes
Dark Desire Season 1 and Season 2